से’क्सको मामिलामा भ्रमित हुन्छन् भ्यागुता, जुत्तालाई पनि छोड्दैनन् ! - Mitho Khabar
May 19, 2022 mithokhabarLeaveaComment on से’क्सको मामिलामा भ्रमित हुन्छन् भ्यागुता, जुत्तालाई पनि छोड्दैनन् !
तस्बिरमा देखिएको यो भ्यागुतो खासमा यौ नसम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासमा जुत्तामा चढेर बसेको छ । भ्यागुतोले यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नुलाई एम्प्लेक्ससस भनिन्छ । एम्प्लेक्ससस जसलाई ल्याटिनमा इम्ब्रेस अर्थात् आलिङ्गन भनिन्छ । यसमा एक भाले भ्यागुतोले सम्बन्ध स्थापित गर्दैै आफ्नो अगाडिको खुट्टाले पोथी भ्यागुतोलाई समात्ने गर्छ ।
कबड्डी ४ ले बाहुबली २ को रेकर्ड तोड्नेमा निर्देशक रामबाबु आशाबादी